Miyey Manchester City kalsooni ku qabtaa in Sergio Aguero uu la sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socda? – Gool FM
Miyey Manchester City kalsooni ku qabtaa in Sergio Aguero uu la sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socda?
Haaruun March 10, 2020
(Manchester) 10 Mar 2020. Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay kalsooni ku qabto in weeraryahankooda Sergio Aguero uu sii joogi doono kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Kaddib ganaax labo sano ah oo Man City laga saaray ciyaaraha Yurub markii ay jabiyeen sharciga dhaqaale wanaagga, mustaqbalka qaar ka mid ah ciyaartoydooda sar sare ayaa su’aal laga keenay.
Aguero waa mid ka mid ah wiilasha Pep Guardiola ee sida aadka ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo garoonka Etihad, iyadoo kooxda lagu soo waramayo inay diyaar u tahay inay waddooyinkeeda kala qeybiso gooldhaliyahooda abid ugu goolasha badan haddii xiddiga reer Argentina uu muujiyo inuu ka tagayo.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Evening Standard, 31-sano jirkaan ma uusan sheegin wax tilmaamaya inuu door-bidayo ka dhaqaaqista Premier League, taasoo keentay in madaxda City ay rumeysan yihiin inuu gabi ahaanba ku qanacsan yahay kooxda haysata horyaalka Ingiriiska.
Aguero ayaa dhaliyay 254 gool 368 kulan uu u saftay kooxda Guardiola tan iyo markii uu kaga soo biiray Atletico Madrid sanadkii 2012-kii, waxaana uu ku guuleystay afar horyaal iyo labo FA Cup.
31-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa haatan uu kula joogo Citizens waxa uu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedka 2020-21.
Håaland oo xiddig ka ciyaara Premier League ku tilmaamay daafaca ugu adag ee uu wajahay
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Kooxaha Man City vs Arsenal ka hor kulankooda habeen dambe ee Premier League… (Yaa xiddigaha ugu badan ku leh?)